Tetika 5 hitandrina ny trano ho madio sy milamina foana | Bezzia
Ny fitazonana ny trano ho madio sy milamina hatrany dia hanampy anao hankafy trano mafana sy milamina ary miala sasatra. NAHOANA tsy misy manelingelina ny fiadanan-tsaina mihoatra ny manana trano mikorontana, satria ny fahitana fotsiny fa mila manao zavatra ianao, dia tsy mamela anao hankafy ny ambiny izay tokony ho fonenanao. Ny tranonao no fialofanao, toerana ahafahanao mahita tony sy fitsaharana.
Ary ho an'ity dia tsy misy safidy afa-tsy ny fanokanana ezaka isan'andro mba hijanonan'ny zavatra rehetra amin'ny toerany. Raha tsy hoe afaka mandray olona hikarakara izany rehetra izany ho anao ianao, amin'izay dia miarahaba anao izahay. Saingy satria tsy mahazatra azy io matetika ary na dia izany aza dia tsara kokoa ny mitazona baiko mamela anao ankafizo ny tranonao amin'ny fotoana rehetra fa tsy mila miezaka mafy.
¿Te hahafantatra ny fomba ahafahanao manana ny tranonao vonona foana ve ianao nefa tsy mamono tena ho madio? Mariho ireto torohevitra ireto. Mety ho elaela vao zatra ary miroso amin'ny fahazarana, fa raha ampidirinao ao anatin'ny fahazaran-dratsinao ireo fahazarana ireo dia ho mora kokoa ny mitazona ny tokantranonao tonga lafatra, azo antoka.
1 Inona no hatao mba hitandroana ny fahadiovan'ny trano sy ny fahadiovany, nefa tsy mamono tena any am-piasana ianao
1.1 Ario daholo izay tsy ampiasainao intsony
1.2 Andraikitra isan'andro tsy azo ahemotra
1.3 Izay rehetra amin'ny toerany
1.4 Amboary ny fandroana aorian'ny fandroana
1.5 Esorina foana ny akanjo
Inona no hatao mba hitandroana ny fahadiovan'ny trano sy ny fahadiovany, nefa tsy mamono tena any am-piasana ianao
Ny fomba tokana tsy mila fanaovana afobe mikorontana isan-kerinandro na isaky ny tapa-bolana dia ny fanaovana zavatra vitsivitsy isan'andro. Zatra mitandrina filaminana ao an-trano, manaova asa madinidinika isan'andro ary amin'izany dia tsy tokony hanao fanadiovana lalina ianao isaky ny fotoana kely. Hanampy anao koa io amin'ny fanadiovana tsara ny zavatra tsy ampiasainao intsony, satria arakaraky ny hanangonanao azy no handanianao vola amin'ny fitazonana ny zava-drehetra milamina.
Ario daholo izay tsy ampiasainao intsony
Akanjo maro ao anaty lalimoara, vatasarihana feno arina finday taloha, labozia tsy misy fofona, jiro taloha ary tranga tsy tambo isaina. Raha mampitsiky anao izany dia azo inoana fa tsy maintsy manadio tsara ianao ao an-trano, milamina, mitranga amintsika maro izany. Ireo zavatra rehetra ireo dia tsy misy dikany ary manampy korontana fotsiny ao an-trano, sokafy ny vatasarihana tsy misy tahotra anao ary atsipazo izay rehetra tsy misy fampiasana marina.
Andraikitra isan'andro tsy azo ahemotra
Ny fanaovana asa madinidinika ao an-trano dia tena ilaina mba hadio sy milamina ny zava-drehetra. Afaka minitra vitsy monja fa ny fahasamihafana dia lehibe. Ataovy isan'andro ny fandriana ary avelao hilamina ny efitranonao ary manitra. Aza avela hangonina ao anaty fitoeran-drano ny lovia, azo atao kokoa ny manosotra izay rehetra voaloto alohan'ny hanasana lovia be dia be. Sasao ny trano iray manontolo, ny gorodona dia hadio ho mora kokoa hatrany ary tsy hamela ireo zavatra tsy hitahita.
Izay rehetra amin'ny toerany
Raha manana fahazarana mody ianao ary mamela ny palitao, poketra, fanalahidy na sarontava na aiza na aiza, tonga ny fotoana mitady toerana mety amin'ny zava-drehetra. Araka izany, rehefa tonga ianao dia hanery ny tenanao hametraka ny zava-drehetra amin'ny toerany. Ohatra, asio fonosana palitao eo am-baravarana ahafahanao manantona kitapo, palitao sy kojakoja. Miaraka amin'ny mpihazona lakile eo akaikin'ny varavarana dia hamaha ny olan'ny peratra fanalahidy ianao. Ny zava-dehibe dia ny manokana toerana sahaza ho an'ny zavatra tsirairay ianao, amin'izay dia ho mora aminao ny hitazona ny filaminana sy ny fahadiovana ao an-trano.
Amboary ny fandroana aorian'ny fandroana
Minitra vitsy dia ampy hanarenana ny fandroana aorian'ny fandroana. Ianao ihany no mila mamafao ny paompy na ny efijery amin'ny lamba, diovy ny fitaratra sy ny mop. Ato anatin'ny 5 minitra dia avelanao ny fanangonana fandroana ary tsy hanangona loto izay haharitra ela kokoa ny fanesorana anao avy eo. Mametraha boaty mahafinaritra ahafahanao mitazona ireo vokatra fanadiovana amin'ny fandroana, ka ny fanatonana azy ireo akaiky kokoa dia hanamora ny fampiasana azy ireo.
Esorina foana ny akanjo
Mampihetsi-po tokoa ny mamela akanjo eo amin'ny fehin-damba mandritra ny andro maromaro na miandry ny aforitra an-jorony mandritra ny andro maromaro. Saingy tsy misy zavatra manome fahatsapana misavoritaka kokoa noho ny manasa lamba eo afovoany. Inona koa, ketrona ny akanjo, very ny fofona fanalefahana lamba ary tsy toa izany tonga lafatra izay tadiavinao isan'andro rehefa miakanjo. Ataovy fahazarana ny mitahiry ny akanjonao raha vantany vao maina izy ireo mba tsy hangonina ary ho mora hitazona.
Na dia toa asa be aza izy ireo, ny marina dia ireo minisitra kely isan'andro ireo dia minitra vitsy amin'ny andronao isan'andro fotsiny. Zavatra izay tsy isalasalana ho feno fankasitrahana ianao rehefa mandeha manadio tanteraka, satria ho nangonina bebe kokoa ny zava-drehetra, hadio ary tsy handany fotoana firy handaoana ny tranonao hadio sy milamina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Tetika 5 hitandrina ny trano ho madio sy milamina foana
Fa maninona aho no voan'ny aretin-kozatra? Ahoana ny fomba hisorohana azy ireo